ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်နေရန်ပျင်းရိခြင်းနည်းလမ်း (၂၀၁၀) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်
လူသားတို့၏မျိုးရိုးဗီဇသမိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်သမျှအရာများသည်ပိုမိုလွတ်လပ်သောလိင်ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရားကိုပြသရန်ဖြစ်သည်။ လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပထမ ဦး ဆုံးအနှောင်အယှက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဒုတိယတစ်ခုသာမျိုးပွားမှုအတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ~ EO Wilson
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံခရိုင်ပွဲတော်မှာဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုစတင်ဖို့စောင့်ဆိုင်းရင်းကျွန်မနဲ့ကျွန်မခင်ပွန်းကရင်ပေါင်ပေါ်မှာအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာအနားယူနေတဲ့တိရိစ္ဆာန်လေ့ကျင့်ရေးသမားတိရိစ္ဆာန်သင်တန်းဆရာတစ် ဦး ပါ ၀ င်တဲ့တွားသွားသတ္တဝါပြပွဲကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့ gator ကိုထိုးလိုက်တာနဲ့ဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်ယဉ်ပါးနေရတာလဲလို့သင်တန်းဆရာကိုမေးခဲ့တယ်။ "ငါကနေ့စဉ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်။ တကယ်လို့များကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့ရင်ပြန်ကောင်းလာမယ်၊ ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး” ဟုသူကရှင်းပြသည်။
ငါအံ့သြသွားတယ် လအနည်းငယ်အကြာမှာငါဘာမှမလုပ်ဘဲမနေစေဘဲနှောင်ကြိုးလိုစိတ်ကိုနှိုးဆွဖို့နှောင်ကြိုးအပြုအမူတွေ (အရေပြားမှအရေပြားထိတွေ့မှု၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းစတာတွေ) ရဲ့စွမ်းအားကိုစတင်နားလည်လာတယ်။ တွားသွားသတ္တဝါများလည်းအလားတူတုံ့ပြန်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။
Bond အပြုအမူတွေ, ဒါမှမဟုတ်ပူးတွဲမှုတွေကိုဖြစ်ကြ၏ မသိစိတ်တစ်ပိုင်းအချက်ပြမှုများ မည်သည့်ကန ဦး ခုခံကာကွယ်မှုဖျက်သိမ်းသည်နှင့်၎င်းသည်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုများကိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်လွယ်ကူစေသည်။ Bond အပြုအမူများသည်ခုခံကာကွယ်မှုကိုလျှော့ချရန်ကောင်းမွန်သောဆေးဖြစ်သည်။ ဤတွင်အံ့ example ဖွယ်ကောင်းသောသာဓကတစ်ခုမှာမွေးစားမိဘများသည်ရိုမေးနီးယားမိဘမဲ့ကလေးနှင့်တုန့်ပြန်မှုပူးတွဲရောဂါရှိခြင်းနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ အကြမ်းဖက်မှုဖြင့်သူသည်အိပ်ခန်းနံရံများအတွင်းအပေါက် ၁၀၀၀ ကျော်ကိုထည့်ခဲ့ပြီးသူကြီးလာသည်နှင့်အမျှမိခင်သည်ကိုယ်ရံတော်ကိုငှားရမ်းရသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်သော်မိဘများသည်နေ့စဉ်တွယ်ကပ်မှုများကိုကြိုးစားသည်။ သုံးပတ်အကြာတွင်သူသည်နောက်ဆုံးတွင်သူ၏မိဘများနှင့်ပေါင်းသင်းခဲ့ပြီးကျန်းမာသန်စွမ်းသောရွယ်တူချင်းဆက်ဆံရေးများလည်းစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့ မိန့်ခွန်း 'ကျေးဇူးတင်ပါတယ်' တစ်ဆုချီးမြှင့်သည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်နို့တိုက်သတ္တဝါများသည်၎င်းတို့၏စောင့်ရှောက်သူများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အတွက်အနှောင်အဖွဲ့သည်ထိရောက်မှုရှိသည်။ နို့စို့ကလေးကိုနို့တိုက်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်မှီတိုင်အောင်ရှင်သန်ရန်မွေးကင်းစကလေးများသည်မိခင်နို့တိုက်သတ္တဝါများနှင့်ပုံမှန်ထိတွေ့ရန်လိုအပ်သည်။ Bond အပြုအမူများသည် neurochemicals (oxytocin အပါအ ၀ င်) အားထုတ်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်ပင်ခုခံကာကွယ်မှုကိုလျော့နည်းစေပြီး bond ကိုဖြစ်နိုင်စေသည်။
တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်ဤရက်ရက်ရောရောအပြုအမူတွေကိုကျနော်တို့လူသားမြားသညျကြှနျုပျတို့၏မိဘများနှင့်ကလေးများနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကရြောကျသှားရာလမျးဖြစ်ကြသည်။ စောင့်ရှောက်သူများ-မွေးကင်းစကလေးအချက်ပြမှုများဒီတော့ထွက်, မျက်လုံးချင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း, အသံ soothing, မြောကျမတို့လျက်, ချစ်ခင်ထိတွေ့မှုများပါဝင်သည်။
ကို Bond တွေကိုတူသောရှားပါး pair တစုံ-Bond နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက် တစ်ဦးအစေခံ အလယ်တန်း function ကို အဖြစ်ကောင်းစွာ (တစ်ခု exaptation အဖြစ်လူသိများ) ။ မိဘနှစ်ပါးစလုံးသည်မည်သည့်ကလေးနှင့်မဆိုချိတ်ဆက်ရန်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည် (ပျှမ်းမျှအားဖြင့်) ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်နေခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပျားရည်ဆမ်းအာရုံကြောဓာတုဗေဒကိုလည်းအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းသည်အရှိန်မြှင့်သည့်ရိုက်ချက်တစ်ခုနှင့်တူသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊
ချစ်သူများအတွက်, Bond အပြုအမူတွေကိုစောင့်ရှောက်သူများနှင့်မွေးကင်းစကလေးများအကြားသူတို့လုပ်ပေးထက်နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားသည်ကြည့်သေးမျဉ်းပြိုင်ထင်ရှားရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအစွမ်းထက်အချက်ပြမှုများပါဝင်သည်:
တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားမျက်လုံးများသို့ငေး
အထူးသဖြင့်ခြေ၊ ပခုံးနှင့်ခေါင်းကိုနှစ်သိမ့်ရန် ရည်ရွယ်၍ အနှိပ်ခံခြင်း
သင့်လက်တွဲဖော်၏နှလုံးသားအပေါ်နားရွက်နား ကပ်၍ နှလုံးခုန်သံကိုနားထောင်ပါ
နို့သီးခေါင် / ရင်သားထိခြင်းနှင့်နို့စို့
Bond အပြုအမူတွေအချို့စပ်စုရှုထောင့်ရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာဆက်ဆံရေးအတွက် sparkling ရေရှည်တည်တံ့နိုင်ရန်အတွက်ထိုအအပြုအမူတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့လိုအပ် နေ့စဉ်, ဒါမှမဟုတ်နီးပါးနေ့စဉ် - မိကျောင်းသင်တန်းဆရာလေ့လာတွေ့ရှိသကဲ့သို့။ ဒုတိယအချက်မှာ၎င်းတို့သည်ကြာမြင့်စွာမဖြစ်ရန် (သို့) အထူးသဖြင့်အားစိုက်ထုတ်ရန်မလိုပါ၊ သို့သော်သူတို့သည်အမှန်တကယ်ကိုယ်ကျိုးစွန့်မှုဖြစ်ရမည်။ ရှည်လျားပြီးအလုပ်များသောနေ့၏အဆုံးတွင်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ငြိမ်ဝပ်စွာထားခြင်းသည်ပင်သင်၏ဆက်ဆံရေးသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းကြောင်းသတိမေ့ထားသောအချက်ပြဖလှယ်ရန်လုံလောက်နိုင်သည်။ တတိယအချက် - သင်ပိုမိုနှောင်ကြိုးပြုသည့်အပြုအမူများကိုအသုံးပြုလေလေ၊ ပိုပြီးထိခိုက်မခံတဲ့ သင့်ဦးနှောက်ကိုသင်ဖြေလျော့ပေးခြင်းများနှင့်မတ်ေတာရှိတဲ့ခံစားရကူညီသော neurochemicals ဖို့ဖြစ်လာသည်။ (မတူဘဲ, ပြင်းထန်သောဆွတစ်ခါတစ်ရံဖြစ်ပေါ်စေသည် သည်းခံနေခြင်း ဆော။ )
စတုတ္ထအထက်ပါစာရင်းတွင်အချို့ပစ္စည်းများကို foreplay ကဲ့သို့မြည်စေခြင်းငှါ, မဟုတ်တဦးတည်းအရေးကြီးသောသဘောနဲ့သူတို့မရှိကြပေ။ Foreplay လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ဆောက်ခြင်းဆီသို့ရည်ရွယ်နေသည် တင်းမာမှု နှင့်အထွတ်အထိပ်-သောချွတ်သတ်မှတ် သိမ်မွေ့သံသရာ equilibrium ဖို့ဦးနှောက်ပြန်မရောက်မီ neurochemical အပြောင်းအလဲများကို (နှင့်တခါတရံအပ်သောအမြင်ဆိုင်း) ၏။ ဆနျ့ကငျြ, Bond အပြုအမူတွေဆီသို့ရည်ရွယ်နေကြပါတယ် အနားယူခြင်း။ သူတို့က amygdala အဖြစ်လူသိများတဲ့စရိုက်တွေဦးနှောက်အဟောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဝေဒနာတွေသည့်အခါသူတို့ကအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ကြသည်။
amygd ala ရဲ့အလုပ်ကငါတို့သတိထားစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် upဤမသိစိတ်တစ်ပိုင်းသတိပေးအချက်များနှင့်ပုံမှန်စိတ်ချမှုမရှိပါက၊ သေချာစေရန်, ကလည်းအသည်းအသန်တှေ့ဆုံပြီးနောက်နှင့်ချက်ချင်းယာယီအားလျော့။ နောက်ဆုံးတွင် fertilization သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးဗီဇ၏အဓိက ဦး စားပေးဖြစ်သည်။ သို့သော်ပုံမှန်၊ ရည်မှန်းချက်မရှိသောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည်နှောင်ကြိုးအပြုအမူတစ်ခုကဲ့သို့ ပို၍ ထိရောက်ပုံရသည်။ ဤအရာသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအော်ဂဇင်တစ်ခုရှေ့တွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောစကားလုံးသည်အလွန်ကောင်းသည်ဟုဆိုလိုသော်လည်းရောထွေးသောမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့နိုင်သည်။ ဤဆန့်ကျင်သောမသိစိတ်တစ်ပိုင်းသတိပေးချက်များသည်“ ဆွဲဆောင်ခြင်း - ရွံရှာခြင်း” ဖြစ်ရပ်ကိုနှစ်သက်သူများသည်၎င်းတို့၏ပျားရည်ဆမ်းခရီးတွင်အနိမ့်ဆုံးအနိမ့်အမြင့်ပြီးနောက်မကြာခဏသတိပြုမိသည်။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, မသာထိတွေ့ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးတစ်ဦးအာကာသဖန်တီးပေးပါတယ်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦး shared ကြောင့်လည်း, အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ecstatic ဖြစ်နိုင်သည်
ည ၁၁ နာရီနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကထုံထိုင်းနေတယ်။ နှစ်နာရီကြာသည်။ ecstatic cuddling ။ ငါချက်ချင်းစကားများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးပြီးခဲ့သည့်ညဥ့်အတွေ့အကြုံများရှိခဲ့ပါတယ်။ ကြွယ်ဝသောနက်ရှိုင်းသောအပြည့်အဝ။ သိမ်မွေ့။ အစွမ်းထက်။ ရွေ့လျား။ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်ပိုမိုကြီးမားသောဆက်သွယ်မှုကိုညွှန်ပြသည်။ ကျနော်တို့ဆက်သွယ်မှုရှိကြ၏။ သူမပြောခဲ့သည့်အတိုင်းလှိုင်းတစ်ချောင်းကဲ့သို့ကောင်းကင်၌လှုပ်နေသောငှက်တစ်ကောင်ကဲ့သို့စိတ်ထဲတစ်ခုနှင့်တူသည်။ ”
သငျသညျ ecstasy တွေ့ကြုံခံစားရသည်ဖြစ်စေမပေါင်းစပ်သည့်အပြုအမူများသည်သဟဇာတရှိသည့်အရောင်တောက်ပမှုကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်လက်တွေ့ကျနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့သောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ပေါင်းစပ်။ အပန်းဖြေအနားယူချိန်များနှင့် (နှင့်က) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောအချက်ပြ၏နိမ့်ဆုံး အော်ဂဇင်ကနေတဆင့်) နှင့်သင်အံ့သြစရာလွယ်ကူခြင်းနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးအတွက်သဟဇာတရေရှည်တည်တံ့နိုင်မတှေ့ရပေမည်။
ဒီရှားရှားပါးပါး“ swan” (အားစိုက်ထုတ်ပြီးသဟဇာတညီညွတ်စွာအတူတကွနေထိုင်ကြတဲ့စုံတွဲများ) ဟာမွေးဖွားခြင်းမဟုတ်ဘဲများသောအားဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ စင်စစ်ယခုကျွန်ုပ်သည်ဤကဲ့သို့သောသတင်းဆောင်းပါးများကိုအသေအချာသုံးသပ်ပြီးဖြစ်သည် စုံတွဲပျော်ရွှင်စွာလက်ထပ် နှစ်ပေါင်း 80 ကျော်။ သတင်းစာဆရာက“ ဒီစုံတွဲဟာဘယ်တော့မှအနမ်းမရှိဘဲအိပ်ရာမဝင်ရဘူး” ဟုဆိုသည်။
Hmmm ... အကြောင်းမရှိသို့မဟုတ်အကျိုးသက်ရောက်မှု?
Listen: ကြွက်တွေက ultrasound အတွက်ဖောက်ပြန်အကြောင်းကို '' ငြင်းခုန် ''
အားလပ်ရက်အပေါ် Cancun ရှိနေစဉ်ကပြောပါတယ်,
အဆိုပါအနှောင်အဖွဲ့အပြုအမူပစ္စည်းပစ္စယအံ့သြဖွယ်ပါ! သူမသည် (အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘရာဇီးလ်) ကကျွန်ုပ်တို့၌သန်းပေါင်းများစွာသောအခွင့်အရေးများစွာရှိသည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုငါမကြိုက်ဘူး။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားကြသည်, အထူးခံစားရပါတယ်။ စွမ်းအင်ကောင်းတယ်၊ ငါမင်းကိုသဘောကျတယ်”
ငါထင်တာကတော့ယောက်ျားအများစုလိုပဲသူမဘောင်းဘီထဲကိုချက်ချင်းဝင်ဖို့မကြိုးစားခဲ့လို့ပါ။ တစ်နေ့လုံးနမ်းခြင်း၊ ကိုင်ခြင်းနှင့်ထိမိခြင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး အတွက်အလွန်ကောင်းသည်။
သူမနှင့်စကားပြောနေစဉ်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများသည်မတော်တဆတွေ့ဆုံမိစဉ်အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်မျက်လုံးချင်းဆုံမိသည်။ မျက်လုံးချင်းထိတွေ့မှုသည်အလွန်ပြင်းထန်နိုင်သည် စကားမပါဘဲတစ်ကမ္ဘာလုံး။ ငါချိတ်တယ် ငါ့နံနက်ပြေးလွှားနေစဉ်လမ်းပေါ်မှာထပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အမျိုးသမီးတွေကအရမ်းလှတယ်
porn အရှုံးမပေးဖို့ Bond အပြုအမူတွေကိုအသုံးပြုခြင်း
ငါ porn အပ်သောအခါ, ငါဘယ်တော့မှအရင်ကဲ့သို့ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်အတူနေ့စဉ် Bond အတွက်စေ့စပ်။ နံနက်နှင့်ညဉ့်, ဖြစ်ကောင်း 60 မိနစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနှင့်အကြားမှာရှိတဲ့ကိုင်ပြီးလက်အများကြီး။ သူမကသူမ၏စားပွဲခုံမှာကငါ့ကိုရန်နှင့်သူမ၏အလွန်ခံစားခဲ့ရစဉ်ကိုယ့်ကိုငါ့ဇနီးတစ်ဦးကိုငါးမိနစ်အနှိပ်ကိုပေး၏။
ဒါကအခုငါ့ဘ ၀ ကိုရှင်သန်စေတယ်။ မကြာခဏဆိုသလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်သောအဆက်အသွယ်များရှိသော်လည်းအသားအရေနှင့်အသားအရေနှင့်အရေပြားထိတွေ့ခြင်း၊ အနှိပ်ခံခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အများစုမှာနမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အမင်းထင်ဟပ်စေသောအရာများမပါဝင်ပါ။
"The Brave Terry သင်္ဘောသားများသည်သူ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကိုအဆင်ပြေစေရန် 90-Day လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်"
[ဒီ Bond အပြုအမူတွေ၏တနျခိုးကွီးစှာသောသာဓကဖြစ်ပါသည်။ ]
သာမာန်လူတစ်ယောက်ကမထားဘူး ရှေးခယျြ ရက်ပေါင်း ၉၀ လိင်မှရှောင်ကြဉ်ရန်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ယောက်ျားသည်ရက်ပေါင်း ၉၀ တိုင်လိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားသည်။ တယ်ရီ Crews သည်သာမန်လူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ။ မင်းကြည့်လိုက်ရင် ဘရွတ်ကလင်းကိုးကိုး မင်းသားက ၉၉.၉ ရာခိုင်နှုန်းကြွက်သား။ သူကအထွတ်အထိပ်ပုံစံရှိတယ်။ သူကလိင်ဆက်ဆံချင်တိုင်းသူလိင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်။ သို့တိုင်သူသည်အလွန်သန်မာပြီးနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောလူဖြစ်သော်လည်းသူနှင့်သူ၏ဇနီးသည်ရက်ပေါင်း ၉၀ ကိုဆုတ်ခွာရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
“ ရက် ၉၀ အကုန်ပိုင်းမှာကျွန်မဟာပိုပြီးချစ်ခင်တွယ်တာမှုပိုရှိလာတယ်။ သူဘယ်သူလဲဆိုတာငါသိတယ်။ စကားပြောတာ၊ ချစ်တာပိုလုပ်တာပိုများတယ်။ Crews ကအရမ်းချိုတယ်။ ငါတို့လည်းစမ်းကြည့်မယ် သွားရန် ၈၉ ရက်သာ